Xiddigaha isugu soo haray abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bisha October kooxda Man United oo la shaaciyay – Gool FM
(Manchester) 31 Okt 2019. Manchester United ayaa ku dhawaaqday saddexda xiddig ee ku tartamaysa abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bisha October ee kooxda, kuwaasoo kala ah Rashford, James & McTominay.
Marcus Rashford ayaa hoggaaminaya xiddigahan kaasoo afar kulan u dhaliyay lix kulan uu u ciyaaray bishan, waxaana goolashaas ka mid ahaa 2 gool uu ka dhaliyay Stamford Bridge, ka hor inta uusan maanta 22 sano jirsan.
Daniel James oo abaal-marintan ku guuleystay bishii August ayaa ka mid ah musharaxiinta, waxayna taasi ka dhigan tahay in saddex bilood xiriir ah uu ka soo muuqday xiddigaha ku tartameysa abaal-marintan, kaddib markii uu bandhig muuqda ku soo bandhigay kooxdiisa Man United, inkastoo 6 kulan uu saftay bishan uusan wax gool ah dhalinin.
Ku guuleystaha bishii la soo dhaafay ee September abaal-marintan ee Scott McTominay ayaa sidoo kale ka mid ah musharaxiinta iyadoo xiddigan ka soo baxay akaadeemiyada kooxda uu ku soo bilaawday 5 ka mid ah 6-dii kulan ee kooxdiisa ciyaartay bishan October, isagoo kulanka kale ka soo kacay kursiga keydka.
Scott McTominay oo shaqo fiican ka qabtay khadka dhaxe kooxda Manchester United bishan ayaa 6 kulan uu ciyaaray wuxuu u dhaliyay 1 gool, waxaana lagu abaal-marin karaa bandhigii uu ka sameeyay kulankii Norwich City ee Axadii hore, markaasoo uu dhaliyay goolkii 2000-aad ee ay Man United ka dhalisay taariikhda horyaalka Premier League, markaasoo ay noqotay kooxdii ugu horreysay ee sidaasi sameysa.